Yariisow oo lagu aasay magaalada Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaYariisow oo lagu aasay magaalada Muqdisho
August 4, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Salaada Janaasada ee marxuum Yariisow. [Isha Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Duqii Muqdisho ayaa maanta oo Axad ah lagu aasay magaalada Muqdisho.
Diyaarad siday maydka Cabdirixmaan Cumar Cusmaan ayaa subaxnimadii hore ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
Masuuliyiinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ay kamidyihiin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo raysulwasaare Xasan Cali Khayre ayaa ka qayb galay aas qaran oo loo sameeyay duqa.
Waxaa loo qaaday magaalada Dooxa ee dalka Qatar halkaas oo uu ku geeriyooday Khamiistii.
August 1, 2019 Duqii Muqdisho oo u dhintay dhaawac ka soo gaaray weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay xafiiskiisa